ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဖိလစ်ပိုင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဆောင်ပုဒ်: "Maka-Diyós, Makatao, Makakalikasan, at Makabansâ"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: လူပန်း ဟီနီရန်း
Tagalog (၂၈.၁%)၊ Cebuano (၁၃.၁%)၊ Ilocano (၉%)၊ Bisaya/Binisaya (၇.၆%)၊ Hiligaynon Ilonggo (၇.၅%)၊ Bikol (၆%)၊ Waray (၃.၄%)၊ other (၂၅.၃%)
Roman Catholic (၈၀.၉%)၊ အစ္စလာမ် (၅%)၊ Evangelical (၂.၈%), Iglesia ni Kristo (2.3%), အာဂလိပန် (2%)၊ အခြားခရစ်ယာန် (၄.၅%)၊ အခြားဘာသာများ (၁.၈%)၊ မဖြေ (၀.၆%)၊ ဘာသာမဝင်သူများ (၀.၁%)
• လွတ်လပ်ရေး (အမေရီက၊ ကြေညာ)
၂၄ ဇွန် ၁၈၉၈
၂၄ မတ် ၁၉၃၄
• လွတ်လပ်ရေး (အမေရီက၊ သတ်မှတ်)
၄ ဇူလိုင် ၁၉၄၆
၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၈၇
၃၀၀,၀၀၀ km² (၁၁၅,၈၃၁ sq mi) (အဆင့်: ၇၂)
၉၀.၅ သန်း (အဆင့် - ၁၂)
၂၉၅/km² (၇၆၅/sq mi) (အဆင့် - ၃၂)
US $၄၆၆.၆၃၂ သိန်းကုဋေ (အဆင့် - ၂၅)
US $၅,၃၆၅.၂၈၇ (အဆင့် - ၉၉)
မြင့် · ၉၀
Peso (PHP "₱")
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ (/ˈfɪləpiːnz/ ( နားဆင်))၊ တရားဝင်အမည် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ သည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ ကျွန်းစုနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ကျွန်းပေါင်း ၇,၆၄၁ ခု ပါဝင်ကာ မြောက်ဘက်မှ တောင်ဘက်သို့ လူဇွန်း၊ ဗီဆားယပ် နှင့် မင်းဒါးနောင်း ဟူ၍ အဓိက ပထဝီဒေသကြီး သုံးခု အဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်မှာ မနီလာမြို့ ဖြစ်ပြီး လူဦးရေအများဆုံးမြို့မှာ ကွီဇုန်မြို့ ဖြစ်ကာ နှစ်မြို့စလုံးသည် မက်ထရိုမနီလာတွင် ပါဝင်သည်။ အနောက်ဘက်တွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်နှင့် အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဆဲလဘီး ပင်လယ်တို့ဖြင့် ဝန်းရံလျက်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ပလောင်းနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ တည်ရှိသည်။
ပစိဖိတ် ချော်ရည်ပူရပ်ဝန်းပေါ်တွင် တည်ရှိခြင်း နှင့် အီကွေတာနှင့် နီးကပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ငလျင် နှင့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း စသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသကဲ့သို့ ပေါများလှသော သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများပြားဆုံး ဇီဝမျိုးကွဲများ ရှိရာဒေသလည်း ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ဧရိယာမှာ ၁၂၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင် (၃၀၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ရှိပြီး ဖိလစ်ပိုင် စာရင်းအင်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့ နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့၏ စာရင်းဇယားများအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ အနည်းဆုံး သန်း၁၀၀ မျှ ရှိသည်။၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အာရှတွင် အဋ္ဌမမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး တကမ္ဘာလုံးတွင် လူဦးရေအများဆုံး အဆင့် ၁၂ ရှိသည်။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး ၁၀ သန်းခန့် သည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် နေထိုင်ကြသဖြင့်  ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံပြင်ပ နေထိုင်သူ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကျွန်းများတလျှောက်တွင် လူမျိုးအစု အများအပြားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အများအပြားကို တွေ့နိုင်သည်။ သမိုင်းမတင်မီခေတ်က နီဂရီတိုများသည် ကျွန်းများတွင် အစောဆုံး နေထိုင်ခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နောက်တွင် အော်စထရိုနီးရှန်းလူမျိုးများ တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ မလေး၊ အိန္ဒိယ၊ အာရပ် နှင့် တရုတ် တိုင်းပြည်များနှင့် ကုန်ဖလှယ်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သော ပင်လယ်ဒေသ တိုင်းပြည်များကို ဒါတုများ၊ ရာဂျာများ၊ စူလတန်များ နှင့် လာကန်း များမှ တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။
၁၅၂၁ ခုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီ စူးစမ်းရှာဖွေသူ ဖာဒီနန် မဂျဲလန်မှ စပိန်သင်္ဘောများကို ဦးဆောင်၍ အရှေ့ဆာမားရှိ ဟိုမွန်ဟွန်ဒေသသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် စပိန်တို့၏ ကိုလိုနီပြုမှု စတင်ခဲ့သည်။ ၁၅၄၃ ခုနှစ်တွင် စပိန် စူးစမ်း ရှာဖွေသူ ရိုင်လိုပက်ဇ် ဒီ ဗီလာလိုဘို မှ ကျွန်းစုများအား စပိန်ဘုရင် ဒုတိယမြောက်ဖိလစ်ကို ဂုဏ်ပြုသည့် အနေနှင့် လာ့ အစ်စလာ ဖီလီပီနာ ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ၁၅၆၅ ခုနှစ်တွင် မက္ကဆီကိုစီးတီးမှ မစ်ဂူယယ် လိုပက်ဇ် ဒီ လယ်ဂပ်ဇီ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ကျွန်းစုများပေါ်တွင် ပထမဆုံး စပိန်တို့၏ အခြေချနေထိုင်မှုကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်သည် စပိန်အင်ပိုင်ယာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်မျှ တည်ရှိခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အဓိက ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ကက်သလစ် ဘာသာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မနီလာမှာ ပစိဖိတ်ဖြတ်သန်း ကုန်သွယ်မှု အတွက် အနောက်ဘက် အချက်အခြာ ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အာရှအား မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရှိ အာကာပူလ်ကိုမြို့ နှင့် မနီလာ ဂယ်လီယွန်ဟု ခေါ်သည့် ကမ္ဘာပတ် စပိန် ကုန်သွယ် သင်္ဘောများဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးခဲ့သည်။
၁၉ ရာစုမှ ၂၀ ရာစုသို့ ပြောင်းလဲလာသော အခါတွင် ဖိလစ်ပိုင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုမှ တဆင့် ခေတ္တမျှသာ သက်တမ်းရှိသော ပထမဆုံး ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိုင်ငံတော်ကို မွေးဖွားပေးခဲ့ကာ ထို့နောက်တွင် သွေးစွန်းသော ဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန် စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုစစ်ပွဲကြောင့် အပါအဝင် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပွားသော ကာလဝမ်းရောဂါကပ်ဘေးကြောင့် စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်သူ ထောင်ဂဏန်း နှင့် အရပ်သား သောင်းဂဏန်း သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ဂျပန်တို့ ဝင်ရောက်သိမ်းယူသည့် အချိန်မှလွဲ၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးသည့် အချိန်အထိ ကျွန်းများ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းချုပ်ထားခဲသည်။ ထို့နောက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်အား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်သော အချုပ်အခြာအာဏာနိုင်ငံသည် ဆူညံပွက်လောရိုက်နေသော ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အတွေ့အကြုံကို မကြာခဏ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီး အကြမ်းမဖက်သော တော်လှန်ရေးဖြင့် အာဏာရှင်စနစ်ကို တွန်းလှန်ခဲ့ခြင်းလည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၊ အာဆီယံ၊ အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ နှင့် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးနိုင်ငံများ အဖွဲ့တို့ကို စတင်တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့ပြင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ ဌာနချုပ် တည်ရှိရာ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်အား ထွန်းသစ်စ ဈေးကွက်နိုင်ငံ နှင့် စက်မှုပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံအသစ် အဖြစ် မှတ်ယူကြပြီး  စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသော စီးပွားရေးမှ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတို့သို့ ပိုမို အခြေခံသော စီးပွားရေး အဖြစ် ပြောင်းလဲလျှက် ရှိသည်။  အရှေတောင်အာရှတွင် အရှေ့တီမောနိုင်ငံ နှင့် အတူ ခရစ်ယာန်ဘာသာ အဓိက ကိုးကွယ်ရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် တည်ရှိသည်။
၂.၂ ကိုလိုနီ မတိုင်မီခေတ်
၂.၂.၁ အစောပိုင်း သမိုင်းဝင် ကမ်းရိုးတန်း မြို့ပြနိုင်ငံများနှင့် အစိုးရများ
၂.၃.၁ စပိန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလ
၂.၃.၂ အမေရိကန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလ
၂.၃.၃ ဂျပန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလ
၂.၄ ကိုလိုနီ ခေတ်လွန် ကာလ
၂.၅ ယနေ့ခေတ် သမိုင်းကြောင်း
၄.၁ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဒေသများ
၆.၂ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ
၆.၅ ရေပေးဝေရေး နှင့် စည်ပင်သာယာရေး
၇ လူဦးရေပျံ့နှံ့ နေထိုင်မှု
စပိန် ဒုတိယမြောက် ဖိလစ် ဘုရင်
ဖိလစ်ပိုင်ဟူသော အမည်သည် စပိန် ဒုတိယမြောက် ဖိလစ်ဘုရင်ကို ဂုဏ်ပြု၍ မှည့်ခေါ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ စပိန် စွန့်စားရှာဖွေသူ ရိုင်လိုပက်ဇ် ဒီ ဗီလာလိုဘို က ၎င်း၏ ၁၅၄၂ ခုနှစ် ရှာဖွေရေး ခရီးစဉ်အတွင်း လေးယတ် နှင့် ဆာမားကျွန်းများအား ထိုအချိန်က ဩစတြီးယားမင်းသား ဖြစ်နေသူ ဖိလစ်အား အစွဲပြု၍ ဖဲလီပီးနားဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် လာ့ အစ်စလာ့ ဖီလီပီနာ ဟူသော အမည်သည် ကျွန်းစုအတွင်းရှိ ကျွန်းများအားလုံးကို ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုသော အမည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအမည်အား ကျယ်ပြန့်စွာ မသုံးနှုန်းမီက အခြားအမည်များ ဖြစ်သော အစ်စလာ့ ဒယ် ပိုနီယန်တေး (အနောက်ဘက်မှ ကျွန်းများ) နှင့် မဂျဲလင်ပေးခဲ့သည့် အမည်ဖြစ်သော ဆန် လာဇာရို စသော အမည်များကို အသုံးပြု၍လည်း စပိန်တို့မှ ထိုကျွန်းများကို ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်သည် သမိုင်းတလျှောက်တွင် အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်းတွင် တော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်သော မာလိုလော့စ် ကွန်ဂရက်မှ ရီပတ်ဘလစ်ကာ ဖိလစ်ပီနာ သို့ မဟုတ် ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိုင်ငံ ကို ထူထောင်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ဖူးသည်။ စပိန်-အမေရိကန်စစ် (၁၈၉၈) မှ ဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန်စစ် (၁၈၉၉-၁၉၀၂) ကို ဖြတ်သန်း၍ ဓနသဟာယနိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အချိန် (၁၉၃၅-၁၉၄၆) အထိပင် အမေရိကန် ကိုလိုနီ အာဏာပိုင်များက နိုင်ငံအား ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းများဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီး စပိန်အမည်မှ ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။  ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးသည့် အချိန်တွင် နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်သည် ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
တာဘွန်းဂူများသည် ဖိလစ်ပိုင်ရှိ ရှေးအကျဆုံး လူတို့၏ ရုပ်ကြွင်းများ (တာဘွန်းလူ)ကို တွေ့ရှိရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကာလင်ဂါပြည်နယ် ရိုင်ဇယ်တွင် တွေ့ရှိရသော ကျောက်ခေတ်ကိရိယာများ နှင့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကြောင့် ကျွန်းစုများတွင် နေထိုင်ခဲ့သော အစောဆုံး ဟိုမီနင်းလူသားများရှိကြောင်း သက်သေအထောက်အထားကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၇၀၉,၀၀၀ အထိ တွန်းပို့ပေးခဲ့သည်။  သို့သော်လည်း ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုများတွင် ယနေ့အထိ တွေ့ရှိရသည့် လူတို့၏ ရုပ်ကြွင်းများကို ယူရေနီယမ် အသုံးပြု တွက်ချက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် စိတ်အချရဆုံး စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားသည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၇,၀၀၀မှ ကာလျောင်းလူ၏ ခြေထောက်အရိုးများပင်ဖြစ်သည်။ ယခင်က ထိုထက်စောစီးစွာ တွေ့ရှိရသည်မှာ ကာဘွန်အသုံးပြု တွက်ချက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် စမ်းသပ်ထားသည့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၆,၅၀၀ မှ ပလာဝမ်ရှိ တာဘွန်းလူများ ဖြစ်သည်။ နီဂရီတိုများသည် ကျွန်းစုများတွင် အစောဆုံးနေထိုင်သော လူများဖြစ်သောလည်း ၎င်းတို့၏ ဖိလစ်ပိုင်တွင် ပထမဆုံး အခြေချနေထိုင်မှုကို စိတ်ချရသည့် နည်းလမ်းဖြင့် စမ်းသပ်ထားခြင်း မရှိပေ။
ရှေးခေတ် ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများ၏ ဇာစ်မြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသာ သီအိုရီအချို့ရှိသည်။ အက်ဖ် လန်ဒါ ဂျိုကာနို၏ သီအိုရီ အရ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတို့၏ ဘိုးဘေးများသည် ဒေသတွင်း၌ပင် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဝီလ်ဟမ် ဆိုလ်ဟိမ်း၏ ကျွန်းဇာစ်မြစ်သီအိုရီ အရ  ဘီစီ ၄၈,၀၀၀ မှ ၅,၀၀၀ ခုနှစ် အတွင်း ယခု ပင်လယ်ရေအောက်သို့ မြုပ်နေသာ ဆွန်ဒါလန်း ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းမှ တဆင့် ကျွန်းစုများသို့ လူများ တဖြည်းဖြည်း ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ပြီး အများကြီး တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြောင်းရွှေ့လာခြင်းမဟုတ်ဟု ဆွေးနွေးထားသည်။ အော်စထရိုနီးရှန်း ချဲ့ထွင်မှု သီအိုရီ အရ ထိုင်ဝမ်မှ မလာယို-ပိုလီနီးရှန်း လူမျိုးများသည် ဖိလစ်ပိုင်သို့ ဘီစီ ၄,၀၀၀ ခန့်တွင် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး နဂိုမူလလူများနေရာတွင် ဝင်ရောက် အစားထိုး နေထိုင်ကြသည်ဟု ရှင်းပြထားသည်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာ သက်သေများအရ အများစု လက်ခံထားသည့် သီအိုရီမှ ထိုင်ဝမ်မှ ပြောင်းရွှေ့လာသည်ဆိုသော သီအိုရီဖြစ်ပြီး ထိုသီအိုရီအရ ယန်စီမြစ်ဝှမ်းရှိ လျံဇူးယဉ်ကျေးမှု အစရှိသော ယဉ်ကျေးမှုလောကများမှ ဆင်းသက်လာသော ထိုင်ဝမ်မှ အော်စထရိုနီးရှန်းများသည် ဘီစီ ၄,၀၀၀ ခန့်တွင် ဖိလစ်ပိုင်သို့ စတင်ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီး အစောပိုင်းရောက်ရှိနေသူများနေရာတွင် အစားထိုး ဝင်ရောက်ခဲ့သည် ဟု ယူဆထားကြသည်။ ကျောက်ခေတ်သစ်ကာလအတွင်း ကျောက်စိမ်းယဉ်ကျေးမှု တည်ရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆရပြီး ဖိလစ်ပိုင်တွင် ဘီစီ ၂,၀၀၀ ခုနှစ်ခန့်က အထိ ရှေးကျသည့် ကျောက်စိမ်းဖြင့် အနုစိတ်ထွင်းထုထားသော လက်မှုပစ္စည်းများကို သောင်းဂဏန်းမျှ တွေ့ရှိရသည်။
ကျောက်စိမ်းသည် အနီးအနားရှိ ထိုင်ဝမ်မှ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပြီး အရှေ့တောင်အာရှ၏ ကုန်းမကြီးနှင့် ကျွန်းများတွင်လည်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုလက်မှုပစ္စည်းများကြောင့် သမိုင်းမတင်မီခေတ်က အရှေ့တောင်အာရှ လူ့အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် အကွာအဝေး ရှည်လျားစွာ ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဆိုသော အချက်အတွက် သက်သေဖြစ်သည်။  ဘီစီ ၁၀၀၀ ခုနှစ်သို့ ရောက်သော အခါတွင် ကျွန်းစုများတွင် နေထိုင်သူများသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၄ ခု အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှာ မုဆိုး-ရှာဖွေစုဆောင်းသူ လူမျိုးစုများ၊ စစ်သူရဲလူမျိုးစုများ၊ တောင်ကုန်းနေ ဓနရှင်အုပ်စိုးသော လူမျိုးစုများ နှင့် ဆိပ်ကမ်းနေ လူမျိုးစုများတို့ ဖြစ်ကြသည်။ 
ဘောက်ဆာကုတ်ဒက်စ် ဟု ခေါ်သော မှတ်တမ်းမှ ကာဒါတွမ် သို့မဟုတ် တူမော ဟုခေါ်သော သူကောင်းမျိုးကို ဖော်ပြထားသောပုံ
ယခုအချိန်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ သမိုင်းမတင်မီခေတ်နှင့် အစောပိုင်းသမိုင်းကို ခွဲခြားထားသော အပိုင်းအခြားမှာ အေဒီ ၉၀၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ ရက် ဖြစ်ပြီး ထိုနေ့မှာ လာဂူးနား ကြေးနီပြားပေါ်တွင် ရေးထိုးထားသော ဂရီဂိုးရီးယန်း ပြက္ခဒိန်နှင့် ညီမျှသော နေ့စွဲ ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အစောဆုံး မပျက်မစီးကျန်ရစ်သော မှတ်တမ်းစာ လည်း ဖြစ်သည်။  ထိုနေ့မှာ မနုဿဗေဒပညာရှင်တို့မှ ဖိလစ်ပိုင်၏ တိုးတက်လာသော အချိန်အပိုင်းအခြားဟု သတ်မှတ်ထားသည် ၁ရာစု မှ ၁၄ ရာစု ၏ အလယ်ဖြစ်သည်။ တိုးတက်လာသော အချိန်အပိုင်းအခြားမှာ လူအဖွဲ့အစည်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပုံစံများ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းများ ကွဲပြား၍ အထူးပြုအလုပ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း နှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာသို့ ကုန်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်လာခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။  ၁၃၀၀ ခုနှစ်များသို့ ရောက်သောအခါတွင် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ကျယ်ပြန့်သော မြို့ရွာဒေသများမှာ တိုးတက်နေသော ကုန်သွယ်ရေးဌာနများ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း အပြောင်းအလဲအတွက် ဗဟိုချက်မ ဖြစ်လာခဲ့ကာ ရှုပ်ထွေးသော ဘဝပုံစံများဆီသို့ လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထို သွင်ပြင်လက္ခဏာကို ဖိလစ်ပိုင် မနုဿဗေဒပညာရှင် အက်ဖ် လန်ဒါ ဂျိုကာနိုက ဖိလစ်ပိုင် အစောပိုင်းသမိုင်း၏ ဘာရန်ဂစ်အစိတ်အပိုင်းဟု အမည်ပေးခဲ့ပြီး ထိုအချိန်ကာလမှာ ၁၄ ရာစု အစမှ စပိန်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဖိလစ်ပိုင်၏ ကိုလိုနီခေတ်စသည့် အချိန် အထိပင် ဖြစ်သည်။
အေဒီ ၁ ရာစုတွင် သံကို တွေ့ရှိခဲ့သည်မှ စ၍ ထင်ရှားသော လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် မြို့ရွာဒေသများ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့ကာ အလွှာခွဲခြားခြင်းနှင့် အထူးပြုလုပ်ကိုင်ခြင်း စသော လူမှုဘဝ ပုံစံအသစ်များ ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သည်။
ဤလူ့အဖွဲ့အစည်းများထဲမှ အချို့ အထူးသဖြင့် မြစ်ကြီးများ၏ မြစ်ဝ သို့မဟုတ် မြစ်ဝအနီးတွင်ရှိသော ကမ်းရိုးတန်းမြို့ရွာဒေသများမှာ နောက်ဆုံးတွင် အရှေ့တောင်အာရှ၏ အစောပိုင်း ကုန်သွယ်ရေး အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် သိသာသော ပမာဏတစ်ခုမျှ ကုန်သွယ်မှုပြုသည် အထိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးသော မလေးရှားပြည် နှင့် ဂျားဗားပြည် တို့အပြင် တရုတ်ရှိ မင်းဆက်အမျိုးမျိုး ထိုင်း, နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် မွတ်စလင် စူလတန်နယ် ဘရူနိုင်း တို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ဗီယက်နမ်  ဂျပန်  နှင့် အခြားသော အော်စထရိုနီးရှန်း တိုင်းပြည်များ နှင့်လည်း ကုန်သွယ်မှုပြုခဲ့ကြသည်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များ အရ တရုတ်တို့နှင့် ကုန်သွယ်ချင်းသည် တန်မင်းဆက် လက်ထက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဆောင်မင်းဆက် လက်ထက်တွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ အေဒီ ၂ ရာစုသို့ ရောက်သော အခါတွင် ဖိလစ်ပိုင်ရှိ အချို့သော (အကုန်မဟုတ်ပေ) လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် တရုတ်သို့ ကိုယ်စားလှယ်များ စေလွှတ်ပြီး တရုတ်တော်ဝင်နန်းတော်မှ သတ်မှတ်ထားသော အစွယ်အပွား စနစ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။  ထိုသို့သော အစွယ်အပွားနိုင်ငံများသည် တရုတ်ဗဟိုပြု စနစ်ကို လက်ခံကြရပြီး ထိုစနစ်မှ တရုတ်နှင့် တော်ဝင်နန်းတော်တို့အား ကမ္ဘာ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုဌာန အဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။ ဖိလစ်ပိုင်၏ အစောပိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် ထိုစနစ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် တရုတ်နှင့် ကုန်သွယ်ရန် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း ထိုအခြေအနေသည် စစ်ရေး နိုင်ငံရေး အရ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ် အမှန်တကယ် မသက်ရောက်ခဲ့ပေ။ 
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော်ကပင် အီဖုဂေါင်း/အီဂိုရော့ လူမျိုးများသည် မတ်စောက်သော တောင်ကုန်းဒေသများတွင် လှေကားထစ် စိုက်ပျိုးရေး စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အစောပိုင်း ဖိလစ်ပိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် မလေးရှားရှိ နိုင်ငံအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍မူ ဒဏ္ဍာရီများတွင် အစောပိုင်း ဖိလစ်ပိုင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် သီရိဝိဇယ အင်ပိုင်ယာနှင့် ဆက်ဆံရေး ရှိကြောင်း ပြောလေ့ရှိသော်လည်း ထိုသို့ ဆက်ဆံရေး ရှိကြောင်းကို သက်သေပြနိုင်မည့် မည်သို့သော ရှေးဟောင်း သုတေသန အထောက်အထားကိုမှ မတွေ့ရှိခဲ့ရပေ။ သို့သော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင် မာဂျာပါဟစ် အင်ပိုင်ယာ နှင့် ကုန်သွယ်မှု ပြုခဲ့ကောင်းကိုမူ လုံလောက်သော အထောက်အထား များ တွေ့ရှိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်၏ အစောပိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်တွင် အိန္ဒိယတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု မည်မျှ အတိုင်းအတာ အထိ ရှိသည် နှင့် မည်သို့ ရှိသည် ဆိုသော အချက်မှာ အရှေ့တောင်အာရှ သမိုင်းပညာရှင်များကြားတွင် အငြင်းပွားစရာ အချို့ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။  သို့သော်လည်း လက်ရှိတွင် ပညာရှင် အများ သဘောတူညီမှု ရထားသည်မှာ ထိုစဉ်က အိန္ဒိယနှင့် ဖိလစ်ပိုင်ကြားတွင် တိုက်ရိုက် ကုန်သွယ်မှု အနည်းငယ်မျှသာ ရှိသည် သို့မဟုတ် လုံးဝ မရှိသလောက် ဖြစ်သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။  အိန္ဒိယ၏ ယဉ်ကျေးမှု လက္ခဏာများ ဖြစ်သော စကားလုံး အသုံးအနှုန်း များနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်မှုများမှာ ၁၀ ရာစုမှ ၁၄ ရာစု အစောပိုင်းအတွင်း စိမ့်ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အစောပိုင်း ဖိလစ်ပိုင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဟိန္ဒူမာဂျာပါဟစ် အင်ပိုင်ယာတို့ ကြားရှိ ဆက်ဆံရေးမှ တဆင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။  ထို့ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင် ကျွန်းစုများသည် မဟာအိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှုဇုံ၏ အပြင်ဘက် အစွန်းတွင် ရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။ (အခြားသောနိုင်ငံများမှာ အာဖဂန်နစ္စတန် နှင့် တောင်ဗီယက်နမ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုများ၏ အစောပိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆင့်အတန်း ၃ ခု ခွဲခြားထားသည်။  ကွဲပြားသော ယဉ်ကျေးမှုများတွင် ထိုအဆင့်အတန်း ၃ခုကို ကွဲပြားသော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ဖော်ပြလေ့ ရှိသော်လည်း မပြောင်းမလဲ ရှိသည်မှာ အထက်တန်းစာ သူကောင်းမျိုး အဆင့်၊ လွတ်လပ်သော လူ အဆင့် နှင့် အလီပင် သို့ မဟုတ် အိုရီပန်ဟု ခေါ်သော ကြွေးမြီရှိသူ မှီခိုအဆင့်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ သူကောင်းမျိုး အဆင့်တွင် ပါဝင်သူများထဲတွင် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ကိုယူထားသော ဒါတု များ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်သည့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့များ ဖြစ်သော ဘာရန်းဂေး သို့မဟုတ် ဒူလိုဟန်တို့အား ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုကြသည်။ ထိုဘာရန်ဂေးများ ပေါင်းစပ်ကြသည့် အခါတွင် ပိုမိုကြီးပြသော မြို့ရွာဒေသများကို တည်ထောင်ကြသည် သို့မဟုတ် ပထဝီ အနေအထားရ ပိုမို၍ လျော့ရဲသော မဟာမိတ် အဖွဲ့များ, အဖြစ် နေထိုင်လေ့ ရှိကြလေသည်။ ထိုအစုအဖွဲ့များတွင် အသက်အကြီးဆုံး သို့မဟုတ် လူအလေးစား ခံရဆုံး သူအား ထိပ်ဆုံး ဒါတု အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြပြီး လာကန်၊ ဆူလတန်၊ ရာဂျာ သို့မဟုတ် ပိုမို၍ လုပ်သက်ရင့်သော ဒါတု ဟု အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
အစောပိုင်း သမိုင်းဝင် ကမ်းရိုးတန်း မြို့ပြနိုင်ငံများနှင့် အစိုးရများ[ပြင်ဆင်ရန်]
အေဒီ ၉၀၀ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရသောလာဂူးနား ကြေးပြားစာသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် အစောဆုံးတွေ့ရသော သမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်ပြီး လာဂူးနား၊ လမ်ဘန်းတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထိုမြို့ပြနိုင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်များ၏ အစောဆုံးသမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ လာဂူးနား ကြေးပြားစာပေါ်တွင် တွေ့ရပြီး ထိုမှတ်တမ်းမှ တာဂါးလော့ နိုင်ငံဖြစ်သော တွန်ဒို (အေဒီ ၉၀၀ မတိုင်မီ မှ အေဒီ ၁၅၈၉) နှင့် တွန်ဒိုအနီးတဝိုက်တွင် တည်ရှိမည်ဟု ယူဆရသော အခြားဒေသ နှစ်ခု သုံးခု တို့ အပြင် မင်ဒါနောင်းရှိ ဒီဝါတာတောင် အနီးမှ ဒေသတစ်ခု နှင့် ဂျားဗားကျွန်းပေါ်မှ မီဒန်ဘုရားကျောင်း အစုအဝေးတို့ ကို သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်းထားသည်။ ထိုနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေး ဆက်သွယ်မှု အတိအကျကို ကြေးပြားစာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ မရှင်းသော်လည်း ထိုကြေးပြားစာသည် ဒေသတွင်းနှင့် ဒေသပြင်ပ နိုင်ငံရေးဆက်သွယ်မှုများ အေဒီ ၉၀၀ မတိုင်မီကပင် ရှိခဲ့ကြောင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် လက်ခံထားသည့် သက်သေ အထောက်အထားပင် ဖြစ်သည်။
စပိန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် အလယ်ခေတ်အခါကပင် အဆက်အဆံရှိခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားတွေ့ရသည်။ 'မင်' ဘုရင်များ လက်ထက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နှင့် တရုတ်တို့သည် ကုန်သွယ်မှုပြုခဲ့ကြသည်။ ဥရောပတိုက်သားထဲမှ ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုကိုစတွေ့သူမှာ ဖာဒီနန်မဂျဲလင် Ferdinand Magellan အမည်ရှိ စပိန်ဘုရင့်အမှုတော်ထမ်း ပေါ်တူဂီတဦးဖြစ်သည်။ မဂျဲလင်သည် ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုကို စပိန်၏ပိုင်နက်အဖြစ် ကျေညာပြီးနောက် ၁၅၂၁ ခုနှစ်တွင် မတ်တန်ကျွန်းပေါ်၌ တိုင်းရင်းသားတို့၏လက်ချက်ဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့လေသည်။
မဂျဲလင်က စပိန်အဖြစ်ကြေညာခဲ့သော ထိုကျွန်းစုကို နောင်အခါစပိန်ပြည့်ရှင် ဒုတိယဖိလစ် (ထိုစဉ်က ဥပရာဇာမင်းသား) ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ဆေးဗူးကျွန်းတွင် ၁၅၆၅ ခုနှစ်မှစ၍ စပိန်တို့ အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ရာ တဖြည်းဖြည်း အနှံ့အပြားဖြစ်လာသည်။ စပိန်တို့၏ စိုးမိုးမှုကို မိုရိုလူမျိုး၊ အီဂိုရုတ်လူမျိုးများက တွန်းလှန်ခဲ့ကြသေးသည်။ အခြားကျွန်းများသို့လည်း စပိန်စိုးမိုးမှု ပျံ့နှံ့သွား၍ လူအများစုသည် ဗရင်ဂျီဂိုဏ်းဝင်များ ဖြစ်လာကြလေသည်။
အမေရိကန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂျပန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလ[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုလိုနီ ခေတ်လွန် ကာလ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉ ရာစုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုကြီး စတင်လာ၍ ၁၈၁၉ ခုနှစ်တွင် ဟိုဇေးရီဇားကြီးမှူးတည်ထောင်ခဲ့သော လီဂါဖိလစ်ပီနာအသင်းမှာ အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်လေသည်။ အာဇာနည်ကြီးရီဇားအား စပိန်အစိုးရက ၁၈၆၉ ခုနှစ်တွင် သုတ်သင်စီရင်လိုက်သည်။ စပိန်တို့အား တိုင်းရင်းသားတို့က ပုန်ကန်မှုများသည် ဟိုမှသည်မှ ပေါ်ထွက်ခဲ့သော်လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် အနှိမ်နင်းခံရသည်။ စပိန်-အမေရိကန် စစ်ပွဲအပြီး ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင် စပိန်အစိုးရက ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်စုကို အမေရိကန်အစိုးရသို့ ပေးအပ်လိုက်လေသည်။
အမေရိကန်အစိုးရသည် ဖိလစ်ပိုင်ကို လွတ်လပ်ရေးပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်အတန်းကို တစတစ မြှင့်တင်ပေးသည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရရှိခဲ့၍ ဓနသဟာယနိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ ပထမဦးဆုံးသမ္မတမှာ မန်းနွယ်ကေဆွန်းဖြစ်၏။ ထို့ပြင် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်သော အချုပ်အချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေမည်ဟု အမေရိကန်အစိုးရက ကတိထားခဲ့သည်။ သို့သော် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာ၍ ဖိလစ်ပိုင်သည် ကမ္ဘာ့အရှေ့ဖျားတွင် စစ်ဒဏ်အခံရဆုံးသောနိုင်ငံ၊ အပျက်အစီးအများဆုံးသောနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဂျပန်တို့သည် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် လေကြောင်းတိုက်ပွဲများ စတင်ဆင်နွှဲခဲ့၍ နောက် ၅ ရက်အကြာ၌ လူဇုန်ကျွန်းသို့ တက်မိခဲ့ကြလေသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် မနီလာမြို့ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့၏။ အမေရိကန်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တပ်များက ဗာတန်းကျွန်းဆွယ်နှင့် ကော်ရက်ဂျီဒေါ်တွင် လပေါင်းများစွာအပြင်းအထန် ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၄၂ ခုနှစ် မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် ကော်ရက်ဂျီဒေါ်အညံ့ခံလိုက်ရ၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးဒေါက်ဂလပ်မက်အာသာလည်း မိမိဌာနချုပ်ကို ဩစတြေလျသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားရပြီးလျှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးဝန်းရိုက်မှာမူ သုံ့ပန်းအဖြစ် အဖမ်းခံရလေသည်။ ဂျပန်တို့ စိုးမိုးခဲ့စဉ်အတွင်း ပြောက်ကျားခုခံတော်လှန်မှုများရှိခဲ့သည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့၌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးမက်အာသာ၏ လက်အောက်ခံ မဟာမိတ်တပ်များသည် လေးတီးကျွန်းအား ပြန်လည်သိမ်းယူရေးကို စတင်ခဲ့ရာ ဖိလစ်ပိုင်အလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ကုန်းနှင့်ရေ နှစ်ထွေသော တိုက်ပွဲများ၌ ဂျပန်တို့သည် အပြတ်အသတ်အရေးရှုံးနိမ့်ခဲ့၏။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မနီလာမြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့၍ ထိုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားသောအခါတွင်မူ ဂျပန်တို့ သိမ်းပိုက်ထားသမျှ အားလုံးလိုလိုကိုပင် ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်လေသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးပြီးနောက် ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်အစိုးရက ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို ပေးအပ်၍ ထိုနေ့ထိုရက်မှ စပြီးလျှင် ဖိလစ်ပိုင်သည် လွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်လာလေသည်။
တောင်ပိုင်းတရုတ်ပင်လယ်နှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအကြားတွင်တည်ရှိ၍၊ ပမာဏအားဖြင့် ဗြိတိသျှကျွန်းစုလောက်ရှိသည်။ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်မှာ မြင့်မားသော တောင်ထိပ်ပေါ်မှ မြေပြင်ပေါ်သို့ ကျောက်တုံးတတုံးကို ပစ်ချသဖြင့် ကွဲကြေသွားပြီးလျှင် အပိုင်းစကြီးငယ်တို့ လွင့်စင် ကျရောက်နေသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်းကျွန်းစုတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ကျွန်းပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ သို့သော် ၄၀၀ ကျော်ခန့်သာ ကျွန်းဟူ၍ ခေါ်နိုင်လောက်အောင် မြေပြင်ကျယ်ပြန့်သည်။
တောင်စဉ်တောင်တန်းများ၏ အောက်ခြေတလျှောက်တွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ အခန့်ညားဆုံးသော သစ်တောကြီးများတွင် ပါဝင်သည့် သစ်တောကြီးများ ပေါက်ရောက်လျှက်ရှိသည်။ မြင့်မားသော တောင်တန်းများတွင် ထင်းရှူးတောကကြီးများ ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ဖိလစ်ပိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ သစ်ဝါးပေါသည်။ သစ်သည် ဖိလစ်ပိုင်၏ ထွက်ကုန်တမျိုးဖြစ်သည်။ မြေနိမ့်မြေပြန့် နည်းပါးသဖြင့် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများပေါ်တွင် လှေကားထစ်များသဖွယ် စိုက်ခင်းများပြုလုပ်စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
ဆန်စပါး၊ သကြား၊ ကြိမ်၊ မနီလာလျှော်၊ ဆေးရွက်၊ ကန်စွန်းဥ၊အာလူး၊ ကာဖီ၊ မြေပဲ၊ အုန်းသီး၊ အုန်းဆန်ခြောက်တို့သည် ဖိလစ်ပိုင်၏ အရေးပါသော ထွက်ကုန်များဖြစ်ကြသည်။ သရက်၊ ငှက်ပျောစသည်များကိုလည်း အကြီးအကျယ် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဓာတ်သတ္တုများဖြင့်လည်း အတော်အတန်ကြွယ်ဝသဖြင့် ရွှေ၊ သံ၊ ကြေးနီ၊ ကရိုမီယမ်၊ မန်ဂနိသတ္တုများကို အတော်အသင့် တူးဖော်ရရှိသည်။
ဖိလစ်ပီနိုလူမျိုးတို့၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်၍ ဆန်သည် ဖိလစ်ပီနိုတို့၏ အဓိကအစာဖြစ်သည်။
ရေပေးဝေရေး နှင့် စည်ပင်သာယာရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုတွင် လူမျိုးစုံနေထိုင်ကြသည်။ ရှေးအကျဆုံး တိုင်းရင်းသားများမှာ နီဂရီတိုလူမျိုးဖြစ်သည်။ တောင်များပေါ်၌ သွားလာနေထိုင်ကြသော အီဂိုရုတ်လူရိုင်းမျိုးလည်း ရှိသေးသည်။ မင်ဒနာအိုကျွန်းစုတွင် မိုရိုလူမျိုးများ ယနေ့တိုင်တွေ့ရသေးသည်။ နောင်အခါ ထိုရှေးကျသော တိုင်းရင်းသားများအား အဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်လာသော အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးများ လွှမ်းမိုးသွားခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပီနိုဟု ခေါ်တွင်သူများသည် အင်ဒိုနီးရှားများနောက် ရောက်လာသော မလေး (ပသျှူး)လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ဟိန္ဒူနှင့် ဥရောပတိုက်သားအနွယ်များလည်း အများအပြား အခြေစိုက်နေထိုင်လျှက် ရှိကြသည်။ တရုတ်တို့သည် လူနည်းစုဖြစ်သော်လည်း ကုန်သွယ်စီးပွားရေး၌ တွင်ကျယ်ကြသည်။ မက်စတီဇိုခေါ် ဖိလစ်ပီနိုနှင့် စပိန်ကပြားများကို အစိုးရဌာနကြီးများ၊ နိုင်ငံရေးလောက၊ စီးပွားရေးလောကတို့တွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း၌ များသောအားဖြင့် တွေ့ကြရသည်။
↑ "More islands, more fun in PH"၊ CNN Philippines၊ February 20, 2016။ February 20, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Metro Manila Official Website။ December 17, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named psa.gov.ph
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named worldbank.org
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named 2015 census
↑ Stock Estimate of Filipinos Overseas As of December 2013။ Philippine Overseas Employment Administration။ September 19, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dyen, Isidore (1965). "A Lexicostatistical Classification of the Austronesian Languages". Internationald Journal of American Linguistics, Memoir 19: 38–46.
↑ History of Cebu။ Cebu City Tour။ February 22, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kane, Herb Kawainui (1996). "The Manila Galleons", in Bob Dye: Hawaiʻ Chronicles: Island History from the Pages of Honolulu Magazine I. Honolulu: University of Hawaii Press, 25–32. ISBN 978-0-8248-1829-6။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ (1975) The Philippines:aPast Revisited. Quezon City: Tala Pub. Services။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Gates
↑ Guillermo, Emil (February 8, 2004), "A first taste of empire", Milwaukee Journal Sentinel: 03J, archived from the original on December 8, 2012
↑ (1998) Deciphering Global Epidemics: Analytical Approaches to the Disease Records of World Cities, 1888–1912. Cambridge University Press, 21. ISBN 978-0-521-47266-1။
↑ Burdeos, Ray L. (2008). Filipinos in the U.S. Navy & Coast Guard During the Vietnam War. AuthorHouse, 14. ISBN 978-1-4343-6141-7။
↑ The Original People Power Revolution။ Quartet။ February 28, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ admin။ Departments and Offices။ Asian Development Bank။ November 26, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The N-11: More Than an Acronym။ The Goldman Sachs Group, Inc. (March 28, 2007)။ Archived from the original on August 10, 2011။
↑ CIA World Factbook, Philippines Archived July 19, 2015, at the Wayback Machine., Retrieved May 15, 2009.
↑ Scott, William Henry (1994). Barangay: Sixteenth-century Philippine Culture and Society. Ateneo de Manila University Press, 6. ISBN 978-971-550-135-4။
↑ Spate, Oskar H.K. (1979). "Chapter 4. Magellan's Successors: Loaysa to Urdaneta. Two failures: Grijalva and Villalobos", The Spanish Lake – The Pacific since Magellan, Volume I. Taylor & Francis, 97. ISBN 978-0-7099-0049-8။ January 7, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (1967) The Pacific Basin: A History of Its Geographical Exploration. American Geographical Society, 369။
↑ (1957) Encyclopedia of the Philippines, Volume 15, 3rd, E. Floro, 46။
↑ Tarling, Nicholas (1999). The Cambridge History of Southeast Asia – Volume One, Part Two – From c. 1500 to c. 1800. Cambridge University Press, 12. ISBN 978-0-521-66370-0။
↑ "Earliest known hominin activity in the Philippines by 709 thousand years ago" (May 1, 2018). Nature 557 (7704): 233–237. doi:10.1038/s41586-018-0072-8. PMID 29720661. Bibcode: 2018Natur.557..233I.
↑ Henderson၊ Barney။ "Archaeologists unearth 67000-year-old human bone in Philippines"၊ The Daily Telegraph၊ August 4, 2010။ August 4, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fox, Robert B. (1970). The Tabon Caves: Archaeological Explorations and Excavations on Palawan. National Museum, 44။ December 16, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Scott 1984, p. 15.
↑ Scott 1984, p. 138, "Not one roof beam, not one grain of rice, not one pygmy Negrito bone has been recovered. Any theory which describes such details is therefore pure hypothesis and should be honestly presented as such."
↑ Solheim, Wilhelm G. (2006). Archaeology and Culture in Southeast Asia: Unraveling the Nusantao (in en). UP Press, 57–139. ISBN 978-971-542-508-7။
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ Mijares, Armand Salvador B. (2006). "The Early Austronesian Migration To Luzon: Perspectives From The Peñablanca Cave Sites". Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association (26): 72–78.
↑ (2014) The Global Prehistory of Human Migration, 213။
↑ Solheim, Wilhelm G., II. (January 2006). Origins of the Filipinos and Their Languages။ August 27, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Scott 1984, p. 17.
↑ (2011) Pathos of Origin, 31–41။
↑ (2007) Ancient jades map 3,000 years of prehistoric exchange in Southeast Asia။
↑ Legarda, Benito, Jr. (2001). "Cultural Landmarks and their Interactions with Economic Factors in the Second Millennium in the Philippines". Kinaadman (Wisdom) A Journal of the Southern Philippines 23.
↑ ၃၇.၀ ၃၇.၁ ၃၇.၂ Postma, Antoon (1992). "The Laguna Copper-Plate Inscription: Text and Commentary". Philippine Studies 40 (2): 182–203.
↑ ၃၈.၀ ၃၈.၁ ၃၈.၂ ၃၈.၃ ၃၈.၄ ၃၈.၅ ၃၈.၆ ၃၈.၇ ၃၈.၈ ၃၈.၉ Jocano, F. Landa (2001). Filipino Prehistory: Rediscovering Precolonial Heritage. Quezon City: Punlad Research House, Inc.. ISBN 978-971-622-006-3။
↑ ၃၉.၀ ၃၉.၁ ၃၉.၂ ၃၉.၃ ၃၉.၄ ၃၉.၅ ၃၉.၆ ၃၉.၇ (1999) Raiding, Trading, and Feasting the Political Economy of Philippine Chiefdoms. Honolulu: University of Hawaiì Press။
↑ ၄၀.၀ ၄၀.၁ Miksic, John N. (2009). Southeast Asian Ceramics: New Light on Old Pottery. Editions Didier Millet. ISBN 978-981-4260-13-8။
↑ ၄၁.၀ ၄၁.၁ ၄၁.၂ ၄၁.၃ ၄၁.၄ ၄၁.၅ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Scott1994
↑ Sals, Florent Joseph (2005). The history of Agoo : 1578–2005 (in English). La Union: Limbagan Printhouse, 80။
↑ Timeline of history။ Archived from the original on November 23, 2009။ October 9, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၄.၀ ၄၄.၁ Jocano, Felipe Jr. (August 7, 2012). A Question of Origins (in en). Tuttle Publishing. ISBN 978-1-4629-0742-7။
↑ ၄၅.၀ ၄၅.၁ ၄၅.၂ Osborne, Milton (2004). Southeast Asia: An Introductory History, Ninth, Australia: Allen & Unwin. ISBN 978-1-74114-448-2။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ&oldid=460349" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မေ ၂၀၁၉၊ ၁၅:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။